Rakibidda Haydarooliga, Adapter Haydarooliga, Pcp Air Compressor - Topa
Shijiazhuang Topa Trading Co., Ltd waa soo saaraha xirfadlaha ah ee Qalabka Hydraulic, Hose Haydarooliga iyo alaabooyinka la xiriira ee ka soo jeeda qaababka caadiga ah ee isku dhafan, naqshadaha gaarka ah. Waxaan ku jirnay badeecado haydarool ah in ka badan 20 sano, oo leh kaladuwanaansho cadaadis ballaaran, heerarka ugu wanaagsan ee iska caabinta abrasion, adkeysiga muddada dheer iyo awooda wareejinta waxqabadka sare.
27 sano oo khibrad ah
In ka badan 1000 alaabood
In kabadan 10 milyan
PCP AIR kombaresarada
isku xirnaanta degdegga ah
12V 300bar kombaresarada hawada
compresso hawo pcp
dhululubo hawo leh jaangooye
Sideed u keydisaa tuubbooyinka Haydarooliga?
Ayaa lacagtaada ka qaaday tuubada cinjirka ee bakhaarkaaga ku jirta? Miyaad ka niyad jabtay markii aad ogaatay in tuubbada hawo-qaadashada ay waxyeello gaadhay markii aad ku deg degtay inaad isticmaasho? Maxaa waxyeelloobay? Tuubbadaada caagga ah ee korontada ku shaqeysa waxaa lagu keydiyaa bakhaarka, lama dumin, umana soo gaadhin qorraxda iyo dabaysha. Waa maxay sababta ...
Sida loo beddelo qalabka korontada ku shaqeeya
Inta badan qalabka tuubbada ee Haydarooliga waxay qaadi karaan cadaadis sarreeya waxayna soconayaan waqti dheer laakiin markii qalabka ay jabaan ama ay si xun u waxyeelloobaan, waxaad u baahan doontaa inaad isla markiiba beddesho si aad uga hortagto inaad waxyeello badan u geysato tuubadaada. Bedelida qalabka tuubbada ee Haydarooliga ma adka oo xitaa haddii aadan haysan ...